Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 19:07
phoethutaw 25 April 2008 at 22:16
မမေ ရေးတာကောင်းတယ် စာအရေးအသားက တကယ့်ကို စာရေးဆရာကြီး တစ်ယောက်လိုပဲ လေးစားပါတယ်.....
ဖုန်း မြင်. 25 April 2008 at 23:43
ဒီလို မိတ်ဆွေတွေတော. မလိုချင်ပါဘူးဟယ်..
ငါ.ဆီလာလည်ရင် ခေါ်မလာခဲ.နဲ.နော် ငါလဲကြောက်တယ်ဟ....
စိုးထက် - Soe Htet ! 26 April 2008 at 05:13
ကောင်းတယ် မေတ္တာ ပွားများ ပြီး အားလုံး ငြိမ်းချမ်း အောင်မြင် ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ :P
လင်းထက် 26 April 2008 at 15:32
ကျွန်တော် ပေါက်ကရ ရေးထားတာတွေနဲ့တခြားစီဘဲ တကယ့်ကိုယ်တွေ့ တွေမို့ အရမ်း ကောင်းတယ် ဆက်ရေးနော် မျှော်နေမယ် ...။
ရွှေပြည်သူ 27 April 2008 at 02:06
အရေးအသားကလည်းကောင်း အကြောင်းအရာကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်း ဆိုတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးတောင် ထမိတယ်မေရေ။ ဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း အတွေ့အကြုံတွေ မျှဝေပေးလို့ အထူးကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်း။ ငြိမ်ချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေး)
HEARTMUSEUM 27 April 2008 at 14:57
မမေက တော်တော်ကံကောင်းတာပဲ။ ကျွန်တော်ဖြင့်မြင်ဖူးချင်လွန်းလို့ သင်းင်္ချိုင်းထဲသွားလိုင်းတာကို မမြင်ရဖူးဗျို့။